Uma ubuza u-Siri uma ethanda i-Apple, uzophendula ukuthi ungumlingani wakhe. Kodwa ngisho nakanjani unezizathu ezimbalwa zokunganeliseki ngabathuthukisi, nakuba angeke abelane nabo nabasebenzisi. Ngisho noma ubani oqinisekisiwe kakhulu wale mkhiqizo uyazi ukuthi kunezinselele kulo. Nasi uhlu lwezizathu ezimbalwa ezithandwa kakhulu ukuthi kungani i-Apple igxeka abantu.
Asikho isikhathi esihle sokuthenga i-iPhone
Uma ungumnikazi we-iPhone, cishe usuvele uqonde ukuthi akusikho isikhathi esihle sokuthenga imodeli entsha. Umjikelezo waminyaka yonke wokukhishwa kwemikhiqizo emisha awuzinzile neze, nganoma isiphi isikhathi ungathola ulwazi mayelana nomodeli omusha, ozovela emakethe. Ngenxa yokuthi i-horizontal ihlale ibuyekezwa, ngokushesha ngemva kokuthenga ifoni, uqala ukucabanga ukuthi kuzodingeka kushintshwe kanjani ngokushesha nokuthi uzokucasuka kanjani izindaba ukuthi imodeli yakho iphelelwe yisikhathi. Ngaphezu kwalokho, njalo kufanele ubhekane ne-Intanethi ngolwazi olumayelana nemodeli entsha kanye namakhono akhe amangalisayo, okwenyusa ukudumazeka kwakho kuphela.
Ukuhleka nge-iPhone entsha kubonakala ngemuva kokukhishwa kwesinye imodeli
Ukubonakala komkhiqizo ngamunye omusha kusuka ku-Apple kubangele ukuqhutshwa kwangempela emisebenzini yezindaba, futhi ngaso sonke isikhathi imodeli inikezwa emphakathini, abantu baqala ukuxoxa ngokusemandleni okulandelayo. Umbuthano wokuhleba, ukuvuza kolwazi kanye nemibiko mayelana nezinhlelo zenkampani akupheli, ngokuphambene nalokho, kuba njalo njalo ngonyaka. Ngaphambi kokuqala kwe-model yesikhombisa, abantu baxoxa ngemininingwane yemikhiqizo emisha ka-2017. Ngenxa yalokho, abasebenzisi bahlale benomuzwa wokuthi basuke behlehliselwe phambili, ngisho noma banezibonelo zakamuva, ezavela emakethe maduzane. Inqubomgomo yobumfihlo yenkampani, ehlukile ekuziphatheni kwezinkampani ezincintisanayo, isekela kuphela ukuhleba okungapheli.
Akukwazi ukuthi kuzoba yini izibuyekezo zamadivayisi ngaphandle kwe-iPhone
Uma ungenasithakazelo ekuhlebeni okungapheli nokuhlebezela okugcwalisa amabhulogi mayelana nemikhiqizo ye-Apple, awukwazi ngisho nalapho amanye amadivaysi yenkampani ezovela - ulwazi luhlale lukhona kuphela ngama-smartphone. Akukho okungaziwa ngemikhiqizo emisha kulayini le-Mac. Le nkampani iyaqhubeka ukuthengisa amadivaysi ekuqaleni kwamanani ngisho neminyaka emva kokukhululwa emakethe, futhi awukwazi ukuthi inguqulo ebuyekeziwe izovela nini, ngakho kunzima ukuhlela ukuthenga kwakho. Khetha isimodeli esivele emakethe, noma ulinde izinyanga ezimbalwa - ngokuzumayo, kuyoba khona inguqulo ethuthukisiwe? Thola ubunzima kakhulu.
Inani lemikhiqizo ye-Apple liphakeme kakhulu
Uma ufuna ukuthenga idivayisi kusuka ku-Apple, kungakhathaliseki ukuthi i-smartphone noma ithebhulethi, ungaqiniseka ukuthi kuzodingeka ukhokhe okungaphezu kwanoma iyiphi idivayisi efanayo nakwamanye abakhiqizi. Isici esiyinhloko uma uthenga - kufanele uqonde ukuthi uzimisele yini ukukhokhela igajethi okungukuthi ukusebenza akuyona i-100% ehambisana nenani eliceliwe. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa okunye, isibonelo, imemori eminingi, ingaba yabiza kakhulu. Yebo, nokulungiswa nakho kuyabiza kakhulu, ngisho noma uqinisekisa idivayisi yakho. Uma ulahlekelwe isesekeli, isibonelo, ama-headphones, futhi kuzokubiza ngaphezu kokujwayelekile.
Akulula ukuthenga ezitolo zenkampani
Wonke umuntu ohlala eduze kwesitolo nemikhiqizo ye-Apple uyazi ukuthi ukuyigwema ngosuku lokuthengisa kwemikhiqizo emisha kuzo zonke izindleko. Kodwa-ke, ngisho noma uya esitolo ngosuku oluvamile, uvame ukubhekana nesipiliyoni esingathandeki kakhulu. Kuhlale kunabantu abaningi ezitolo zenkampani, futhi naphezu kokuthi abasebenzi abanjengomfaniswano we-branded ngokwanele, njalo kufanele ulinde imizuzu embalwa ukuphendula umbuzo owakuthandayo. Uma udinga iseluleko sochwepheshe, kungcono ukuhlela umhlangano naye kusengaphambili. Ngisho noma ufuna ukuthenga izesekeli noma isifiso esifanayo, kuzomele uqale ukuxoxisana nomsebenzi ozokusiza ukuthi wenze ukuthengiselana, kunokungena kwirejista yemali, njengoba kwenzeka ezitolo eziningi ezifanayo.
Izinhlelo zokusebenza ze-smartphone zosesho ezingenakulungiswa
Enye yezinzuzo ezinkulu kunazo zonke ze-iPhones kunezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza eziphezulu ezingalandwa. Kodwa wonke umuntu osebenzise ifoni noma ithebulale ye-brand okungenani kanye angasho ukuthi kunzima ukuhamba kuhlelo lokuthola izinhlelo ezintsha. Azikho izinkinga zokuthola izicelo ezithandwayo kakhulu, kodwa okunye kunzima ukuthola. Uma ungazi kahle ukuthi ubizwa ngani, kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukulanda lokho okudingayo nhlobo. Ngaphezu kwalokho, njalo udinga ukubuyekeza uhlelo lokusebenza. Yiqiniso, izibuyekezo zenza ukusebenza kwedivayisi ephakeme futhi kubaluleke kakhulu, kodwa ukubona cishe nsuku zonke isaziso esibomvu ngesibalo esibonisa inani lezibuyekezo kungenzeka kube nzima kakhulu.
Wonke umuntu ulindele uTim Cook ukuba enze njengo Steve Jobs
Njalo lapho inkampani iveza intsha kumakhasimende, ukuthi abaphikisi abaphikisana nabo, abantu abaningi bacabanga ukuthi uTim Cook akayena nje uSteve Imisebenzi. Wonke umuntu uhlale ekhuluma ngalokho okuzokwenzeka enkampanini uma uMisebenzi esaphila, egxeke ukupheka ngokungafani noMsebenzi, ngokucacile uthi uSteve uzokwenza konke okungafani. Yiqiniso, ukuthola umholi ofanayo njengoSteve Imisebenzi kunzima ngokwanele, kodwa akukho nhlobo ekuhlaseleni njalo iCheka ngoba engahlangani nezinga elibekiwe. Abalandeli abanomdlandla base-Apple ezikhathini zasendulo bakwenza ngokuphelele.
Le nkampani inezimiso ezingavamile mayelana nokusetshenziswa kwamagama wedivayisi
Uma unama-smartphones amaningana, kufanele wazi ukuthi ngesiNgisi igama labo alinabuningi. Inhloko yomnyango wokuthengisa ichaza ukuthi wonke amadivaysi akwa-Apple abizwa ngokuthi yi-singular kuphela, ngakho-ke ngisho noma unezibhebhe ezimbili noma i-smartphone, ifomu legama ngeke liguquke kunoma imuphi umusho.
Uma uthanda imikhiqizo ye-Apple, awukwazi ukumelana nokuthengwa okusha
Naphezu kwazo zonke izici ezicasulayo zemikhiqizo yenkampani, abalandeli abaningi bayavuma ngobuqotho ukuthi abakwazi ukumelana futhi bayaqhubeka bethenga izinto ezintsha. Yiqiniso, kukhona nalabo, emva kwe-smartphone, i-Apple ithengisa idivayisi ngesistimu yokusebenza ye-Android, kodwa kuningi labo abahlala bethembekile kulo mkhiqizo. Abanye bathandana nomkhiqizo ngemuva kokuthenga i-laptop noma tablet, fan ngamunye unendaba. Kungakhathaliseki ukuthi ukuvakashela esitolo senkampani kungathandeki kangakanani, abalandeli sebekulungele ukubekezelela ukuphazamiseka ngenxa yethuba lokusebenzisa idivayisi yakho oyintandokazi. Kulokhu - enye yezimfihlo zokuthandwa kenkampani. Ngemva kokuzama imikhiqizo yayo, ngeke uphelelwe amathuba okuwasebenzisa futhi ngokuqinisekile uzofuna okungaphezulu.